Tag: ho avy | Martech Zone
Tag: ho avy
Mila mijanona ny paranoia mikasika ny hoavin'ny faharanitan-tsaina, robotika, ary automatique. Ny revolisiona indostrialy sy teknika rehetra teo amin'ny tantara dia nanokatra ny olombelona hanana fotoana tsy voafetra amin'ny fampiharana ny talentany sy ny fahaizany mamorona. Tsy hoe tsy manjavona ny asa sasany - mazava ho azy fa maty izy ireo. Saingy ireo asa ireo dia nosoloina asa vaovao. Rehefa mijery ny biraoko aho anio ary mijery ny asantsika, dia vaovao daholo! Mijery sy manolotra amin'ny AppleTV aho,
Ahoana ny fomba teknolojia mamolavola ny ho avin'ny marketing
Zoma, Martsa 14, 2014 Douglas Karr
Mazava fa ny ho avin'ny marketing dia amin'ny rindranasa finday, ary misy habaka lehibe azo hitombo; Amin'izao fotoana izao dia 46% amin'ireo orinasa no manana rindranasa finday. Ambonin'ny fifandraisana finday, Big Data dia manome fotoana hafa fitomboana, fa ny 71% amin'ireo CMO dia tsy vonona amin'ny fipoahana data. Ny finday dia mamolavola ny ho avin'ny marketing 46% an'ny orinasa amin'izao fotoana izao dia manana kinova finday amin'ny tranokalany ary 30% no mikasa ny hanaraka